आज शुक्रबारको राशीफलः तपाईको राशीमा कस्तो प्रभाव छ ? हेर्नुस्:: Artha Dabali
आज शुक्रबारको राशीफलः तपाईको राशीमा कस्तो प्रभाव छ ? हेर्नुस्
आज वि.सं. २०७६ असार ६ गते शुक्रबार तदनुसार ई.सं. २०१९ जुन २१ तारिख । जेठ कृष्णपक्षको चतुर्थी तिथी ।
अरुलाई प्रभावित पारेर काम गर्ने समय छ । नाम, दाम र प्रतिष्ठा र पुरस्कार प्राप्त हुनेछ । भूमि, वाहन र पैत्रिक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्ने योग छ । व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ ।
काममा मातापिताको सुझाव र सल्लाह प्राप्त होला । हाकिम, गुरुवर्ग वा विशिष्ट व्यक्तिको विचारले प्रभावित तुल्याउँनेछ । प्रशस्त आम्दानी हुनेछ । पितृधनबाट फाइदा उठाउन सकिनेछ । आम्दानी गरिएको धन मनोरञ्जन र खानपानका क्षेत्रमा खर्च हुनसक्छ । दुरगामी भविष्यप्रति लक्षित लगानी गरेमा फाइदा हुनेछ । श्रमको उचित मूल्यांकन होला । मेष राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग ध्वाँसे र शुभ अंक ६ रहेको छ ।
आफन्तले सहयोग गर्दैनन् । आफ्नै पाखुरी र बुद्धि खियाएर जुनसुकै काममा सफलता पाउनु हुनेछ । आकस्पिक यात्राको समय छ तर यात्राबाट सोचेजस्तो प्रतिफल प्राप्त हुनेछैन । दानपुण्यका कार्यतर्फ समय राम्रो छैन ।
तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विलम्ब गरेमा भाग्यबलमा कमी आउन सक्छ । दुरदराजमा रहेको पर्यटकीय स्थल, तीर्थ वा मन्दिरको भ्रमण हुनसक्छ । घरमा समस्या र अस्वस्थता यथावत रहनेछन् । बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षमताको उपयोग हुनसक्दैन । यस राशी हुनेहरुका लागि आज शुभ रंग सेतो वा पहेलो शुभ अंक ५ रहेको छ ।
प्रतिकूल परिस्थिती छ आज धेरै रौसिनु हुँदैन । प्रणय र प्रेममा भुलिनु राम्रो हुँदैन । यद्यपि शरीरमा स्फूर्ति र उमंग देखा पर्नेछ । धन, धर्म र भाग्यबलमा वृद्धी हुनेछ ।
तपाइको विचार, धारणा र दृष्टिकोणको प्रशसा हुनेछ । शरीर स्वस्थ रहनेछ । चोटपककको सम्भावना छ । सचेत हुनुहोला । गोप्य योजना सफल हुन्छन् । लामो समयदेखिको उल्झन सुल्झाउने समय छ । घरायासी वातावरण राम्रो हुनेछ । यस राशी हुनेहरुका लागि आज शुभ रगं कालो शुभ अंक ८ रहेको छ ।
आत्मविश्वास र शीघ्र निर्णय गर्ने क्षमता वृद्धि हुनेछ । रसरंगका चाहाना पूर्ण हुनेछन् । दाम्पत्य सम्बन्धमा सुमुधर छाउनेछ । मनोरञ्जन प्राप्त हुनेछ ।
रमाइलो यात्राको योग छ । मेवा मिष्ठान्न खान पाइनेछ । साझेदारीमा गरेको काम सफल हुनेछन् । आर्थिक पक्ष सबल छ । मित्रको सल्लाहले गरेको काममा फाइदा छ । व्यापार व्यवसायबाट राम्रै लाभ हुनेछ । प्रशस्त धनआर्जनको समय छ । । शुभ रंग गुलाबी वा सिन्दुरे र शुभ अंक ७ रहेको छ ।
प्रतिद्वन्द्वीहरुसँग सर्तक हुनुहोला । खिसीट्युरी गर्नेले तपाईको छवी विगर्ने प्रयार गर्नेछन् । परिवारमा वैचारिक मतभेद देखिनेछ । जीवसाथीसँग ठाकठाकु पर्न सक्छ । अनावश्यक तनाव सिर्जना हुनेछ । आकस्मिक रुपमा स्वास्थ्यमा समस्या देखिनेछ ।
सहयोग गर्नेहरु पछि हट्नेछन् । अनावश्य र दिक्कलाग्दो यात्रा हुनसक्छ । गरिएको उद्यमबाट सफलता प्राप्त गर्न सकिदैन । व्यवसायिक क्षेत्रमा ठूलो अपेक्षा गर्ने दिन छैन । स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनुहोला । हतारमा काम नगर्नुहोला । सिंह राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग हलुका सेतो र शुभ अंक ६ रहेको छ ।
आजको चिन्त र विचारले काम बन्न सक्छ । आज ज्ञान र सिप बाँडेर जस लिने समय हो । व्यवसायिक क्षेत्रबाट राम्रो लाभ प्राप्त हुनेछ । छोराछोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुनेछ ।
इष्टमित्रले प्रशंसा गर्नेछन् । बोलीले काम बन्नेछ । पँ्राज्ञिक र बौद्धिक गतिविधिमा मन जानेछर स्वास्थ्य सबल रहनेछ । भोगविलासमा मन जानेछ । गरेका कामको प्रशंसा हुनेछ । कामधन्दा र व्यवसायको लागि काम गर्ने राम्रो वातावरण बन्नेछ । यस राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग हलुका नीलो वा हरियो र शुभ अंक १ रहेको छ ।
शुरुमा तनाव भए पनि दिन रमाइलोमा वित्नेछ । हिम्मतका साथमा अघि बढ्नुहोला । व्यवसाय र कामधन्दामा सफलता प्राप्त हुनेछ । मित्र र आफन्तहरुले सक्दो सहयोग गर्नेछन् । मान्यजनको सुझाव मानेमा घरायासी समस्या समाधान हुनेछ ।
साथीभाइ र सहयोगीहरुले भरपूर सहयोग गर्नेछन् । आफना लक्ष्य र योजनाको बारेमा खुलेर छलफल गर्दा आज सही मार्गदर्शन प्राप्त हुनसक्छ । यस राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग रातो वा पहेलो र शुभ अंक ४ रहेको छ ।
पराक्रम प्रदर्शन गरी प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने दिन हो । परोपकारी कामबाट प्रंससा मिल्नेछ । दिनदुःखीलाई दिएको सहयोगले रोकिउको काम बन्न सक्छ ।
धार्मिक र सामामाजिक काममा समय बित्नेछ । स्वास्थ्य सबल छ । व्यापार व्यवसायमा राम्रै आम्दानी हुनेछ । पशुपालक र दुग्ध व्यवसायीहरुले मनग्ये धन लाभ गर्नेछन् । पारिवारिक वातावरण राम्रो हुनेछ । बन्धवान्धवसँग समेत सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रतियोतिामा विजयी भइनेछ । यस राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग गाढा नीलो र शुभ अंक ३ रहेको छ ।
दिन मध्यम छ । आर्थिक रुपमा राम्रै रहे पनि सामाजिक र व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको लागि मेहनत गर्नुपर्ला । आफन्त वा छिमेकीको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला । प्राविधि कारणले आएको समस्या समाधानका लागि धेरै समय लाग्ला । गरेको काममा सोचेजति सफलता पाउन मुस्किल छ ।
आत्मबलमा कमी हुनेछैन । अध्ययनमा समय दिन सकिदैन । आफन्तहरु टाढिनेछन् । वस्त्र, अलंकार, आदि खरिद गर्दा महंगोमा परिएला । मुखलाई नियन्त्रण गरेको राम्रो हुनेछ । यस राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग घिउ रंग र शुभ अंक २ रहेको छ ।
समय त्यति उत्साहजनक छैन । कृषि, श्रममूलक व्यवसायबाट सोचजस्तो फाइदा लिन सकिनेछैन । पेसा वा नोकरीको क्षेत्रमा असन्तुष्टि बढ्न सक्छ ।
भोगविलास र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा खर्च गर्न मन आकर्षित बन्नेछ । दीर्घकालसम्म गर्ने काम आजलाई स्थगित गर्नुहोला । छिटो समयमा हुने काममा फाइदा छ । मन भावुक र उत्ताउलो बन्नेछ । । काममा मन जानेछैन । आत्मबल बढाएर काम गर्ने समय छ । मिहनतको परिणाम भने प्राप्त हुनेछ । यस राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग सिन्दुरे रातो शुभ अंक ९ रहेको छ ।
मनमा उदासिता आउनेछ । आम्दानीबो बाटो असहज बन्न सक्छ । धन संग्रहको क्षेत्रमा बाधा छ । श्रममूलक काम कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा लाभ हुनेछैन । दैनिकीमा खर्च बढ्नेछ । विश्वास गरेका व्यक्तिबाटै धोका हुने सम्भावना छ ।
परिवार र छिमेकीको सानातिना जिम्मेवारी आइलाग्नेछन् । शरीरमा स्फूर्ति र उमगंको कमी हुनेछ । दिक्क र झर्कोलाग्दा यात्रा हुनेछ । पाहुनाको चाप बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायमा ध्यान जान सक्दैन । पारिवारिक समस्याले मन खिन्न हुनेछ । दीर्घकालिन लगानी गर्नु उपयुक्त समय छैन । यस राशी हुनेहरुका लागि आज शुभ रंग सेतो वा वैजनी र शुभ अंक ४ रहेको छ ।
स्वास्थ्य सबल छ । अध्ययनमा प्रगति हुनेछ । कुरा काट्नेहरु पछि हट्नेछन् । सामाजिक कार्यमा नेतृत्वको अवसर मिल्नेछ । सामाजिक कामले यश सम्मान र प्रतिष्ठा दिलाउनेछ । प्रसासनिक र रोकिएका काम बन्नेछन् ।
बोलीको कदर हुनेछ । मिष्ठान्न भोजनको योग छ । प्रशंसा बढुवा वा जिम्मेवारी मिल्ने देखिन्छ । सद्भाव र प्रेममा सफलता मिल्नेछ । पुराना इष्टमित्र वा प्रेमी÷प्रेमिकाको मिलन हुनसक्छ । शुभ रंग कालो र शुभ अंक ३ रहेको छ ।